နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကားဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Fausto Ramirez | | စက်, အချိန်အား, နည်းပညာ
၏အကျိုးစီးပွား စွမ်းအား နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်နေရောင်ခြည်ကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန် photovoltaic ဆဲလ်များ (ဆိုလာပြားများ) ကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်တာဝန်ရှိသည် ဖိုတွန် (အလင်း) တွင် အီလက်ထရွန် (လျှပ်စစ်ဓာတ်အား) ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဒတ်ချ်ကျောင်းသားအုပ်စုတစ်စုသည်၎င်းအတွင်းလူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည် ကမ္ဘာ့ဖလား နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စိန်ခေါ်မှုကီလိုမီတာ ၆၀၀ အထိလူ ၄ ယောက်သယ်ဆောင်နိုင်သည့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကားတစ်စီးကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အခုထိသြစတြေးလျမှာရှိနေတဲ့ကားတွေအကြောင်းပါ ရှေ့ပြေးပုံစံများ သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိသလောက်ပဲ၊ လူတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးသယ်ဆောင်လို့မရဘူး။ Stella (ဤကား၏အမည်) သည်ပထမဆုံးဖြစ်လာသည် မော်တော်ယာဉ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ကမ္ဘာ၏အကျွမ်းတဝင်။
ဒီအပြင်, Stella ၎င်းသည်အလေးချိန် ၃၈၀ ကီလိုဂရမ်သာရှိသဖြင့်အပေါ့ပါးဆုံးကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ထည်နှင့်ပြုလုပ်ထားသည် လူမီနီယံ နှင့်မျက်နှာသာပေးသောကာဗွန်ဖိုင်ဘာအလွန်အလင်းပစ္စည်းများ အရှိန် နှင့်ယာဉ်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအမိုးကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်ကားခေါင်မိုးပေါ်၌တပ်ဆင်ထားသည် စွမ်းအား နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး.
Stella သည်တစ်နာရီလျှင်ကီလိုမီတာ ၆၀၀ ကိုအလိုအလျောက်ခရီးသွားနိုင်ပြီး၊ ဤခရီးစဉ်တွင်လည်းသုံးစွဲမှုနည်းသည် စွမ်းအား နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကထုတ်ပေးသောအရာကိုထက်နှင့်ပိုလျှံတစ် ဦး အတွက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ် ဘက်ထရီ အဘယ်သူမျှမရှိသည့်အခါကြောင်းအာဏာကိုကားကို အလင်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » စက် » နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကားဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။